HETSIKA ARA-TOEKARENA ::: Nitombo isa ireo mpandray anjara tamin'ny Foaran'ny indostria • AoRaha
HETSIKA ARA-TOEKARENA :Nitombo isa ireo mpandray anjara tamin’ny Foaran’ny indostria
Manome vahana ny vokatra Vita Malagasy. Fahombiazana tanteraka no azon’ny mpikarakara nandritra ny hetsika Foaran’ny Indostria eto Madagasikara na SIM, izay natao teny amin’ny « Forello Expo » Tanjombato, ny 21 hatramin’ny
24 jona lasa teo. Raha ny tatitra voaray dia nitombo hatrany amin’ny 25% ny isan’ireo mpandray anjara, izay nanasonga­dina hatrany ny vokatra Vita Malagasy.
Ankoatra izay dia nivoatra ny fitsidihana nataon’ireo matihanina amin’ny sehatry ny fandraharahana. Somary tsy naharototra ny olon-tsotra kosa anefa izany. Raha ny voalazan’ny mpikarakara ihany, dia isan’ny ainga lehibe ho an’ireo mpandraharaha vao misandratra ny fisian’ny hetsika toy ny SIM.
Orinasa efatra amby enimpolo, vondroa orinasa fito ary fikambanana araka asa iray rahateo no nandray anjara tamin’io hetsika notanterahina nandritra ny efatra andro io. Fantatra fa miantoka ny roapolo isan-jaton’ny fampidiran-ketraeto amin’ny firenena izy ireo.
Marobe ireo vokatra Vita Malagasy manana ny kalitaony no naranty tao amin’ireo tranoheva teny an-toerana. Nanentana hatrany ny Malagasy mba hanjifa ny vitantsika, na ny filohan’ny SIM Rajaonera Fredy na Rasamimanana Tiana, solon­tenan’ny vondrona Sipromad. “Tsy mena-mitaha amin’ireo entana avy any ivelany ny vokatry ny indostria malagasy,
ankehitriny”, hoy izy ireo, tamin’ny kabary fanokafana ny SIM, tamin’ny alakamisy lasa teo. Fantatra ihany koa fa miantokaasa ho an’olona enina alina ny SIM.
FITAKIANA FAMOAHANA VOAROHIROHY :: Navotsotra ireo olona dimy nahatonga ny fahamaizan’ny tranona lehibena distrika
FAHAMAIZANA :: Trano dimampolo kila tany Fenoarivo Atsinanana